हामीले गर्ने सानोतिनो गल्तीले पनि कहिलेकाही ठुलो स्वास्थ्य समस्या आउने गर्छ हामीले खाने खानपान, हरेक क्रियाकलापले स्वास्थ्यमा प्रभाव पारीरहेको हुन्छ त्यसैले हामीले धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ
१. पिसाव रोकेर राख्नु ठूलो भूल हो । यस्तो हुँदा युरिनले किडनीमा दवाव बनाउँछ र किडनीमा इन्फ्रेक्शन हुन सक्छ ।२. खानामा धेरै नुन या अधिक मात्रमा साल्ट भएको खाना भयो भने पनि किडनीमा असर गर्न सक्छ । नुनमा रहेको सोडियमले ब्लड प्रेशर बढाउँछ र यसको असर किडनीमा पर्छ ।३. माछुमा पर्याप्त मात्रमा प्रोटिन हुन्छ, धेरै प्रोटिन लिदा किडनीमा मेटाबलिक दवाव बड्छ । यसले किडनीमा स्टोनको समस्या बढाउँन सक्छ ।
४. अध्ययनले भनेको छ कि दिनमा ७ वा ८ घण्टाभन्दा कम सुत्नेलाई हाई ब्लड प्रेशर र मुटु रोगको खतरा हुन्छ । यसले किडनी रोग पनि जन्माउँछ ।५. हरेक दिन ८ – १० गिलास पानी पिउन जरुरी छ । थोरै पानी पिउँदा शरीरमा जम्मा भएको टाक्सिन्स किडनको फन्क्शनमा खराव असर गर्छ । धेरै पानी पिउदा किडनीमा दवाव पर्छ ।
६. धेरै चिसो पदार्थ वा सोड पिउनुपनि किडनीको रोगको कारण बन्छ । यसमा आर्थोफास्फोरिक एसिठ हुन्छ, जसले किडनीमा असर गर्छ ।७.चुरोट वा खैनी खादा शरीरमा टाक्सिन्स जम्मा हुन्छ, जसले किडनी खराव हुने समस्या निम्ताउँछ । यसले ब्लड प्रेशर पनि बढाउँछ र किडनीमा अस गर्छ ।
८. टन्सिलको समस्यालाई ध्यान दिइएन भने यसले पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरोनेफ्राइटिस नामक विरामी हुन सक्छ । यसको व्याक्टीरियाले किडनीमा असर गर्छ ।९. सानोतिनो स्वास्थ्य समस्याका लागि एंटीबायोटिक या पेनकिलर लिने बानीले पनि किडनीमा खराव असर गर्छ । बुहतै आबश्यक नभएसम्म यस्ता औषधी सेवन गर्नुहुँदैन ।१०. सामान्य मानिसको तुलनामा मोटा मानिसको किडन ड्यामेजको खतरा बढी हुन्छ । ओभरडाइटिङका कारण तौल बढ्छ, त्यसकारण धेरै खाने बानीबाट बचौँ । तपाईंले गर्ने यी १० गल्ति, जसले किड्नीमा खराबी ल्याउँछ